Wararka - Alaabada Cunnada wanaagsan
Alaabada Effet Wanaagsan
Sida ay u shaqeyso:
Badeecadani waxay ku shaqeysaa adoo gubanaya baruurta, hagaajinta dhiigga, kordhinta jilicsanaanta.
Camellia Sinensis Caleenta Warbixiinta, Glycerin, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Peg-60 Hydrogenated Castor Oil, Mentholum
Natiijooyinka ugu fiican codso ugu yaraan laba jeer maalintii sida soo socota:
1.Waad qubeysataa habeenkii si aad u kordhiso saadka dhiigga una kobciso nuugista.
2.U mari kareemka caloosha, gacmaha, lugaha, weylaha, dhabarka, iyo badhida kahor waxqabad jireed oo leh ama aan lahayn duub jirka. Codso qadar fiican oo kareemka ah iskuna duug jirkaaga qaab wareeg ah labada dhinacba ha ahaato saacad ahaan iyo xagalbawgeeda ilaa iyo inta maqaarkaagu si buuxda u nuugayo, ka dhigo kareemka khafiifka ku ah walxaha firfircoon ee ku jira lakabka maqaarka ee dufanka. Dhiirrigelinta kala-baxa unugyada baruurta, dardar-gelinta dufanka gubanaya, si loo gaaro himilo wanaagsan oo miisaanka lagu dhimo.
3. Iska ilaali inaad ku maydho qubeyska, qubayska ama dhidid ka shaqeynaya ugu yaraan hal saac ka dib codsiga.
Isla mar ahaantaana inta lagu jiro isticmaalka sheyga sidoo kale ha cunin cunno badan, qaadashada saliid aad u badan. Xitaa alaabooyinka miisaanka lumiya oo wanaagsan, haddii aadan fiiro gaar ah u yeelanaynin cuntada ama aadan xakamayn qaadashada kalooriyada Waxay sidoo kale u horseedi doontaa cayil.
1.Shir 100% Dhirta Dibnaha Sifee
Wax kale maahan laakiin maaddooyin dabiici ah oo tayo sare leh oo lagu soo saaray heerkulka ugu wanaagsan si loo ilaaliyo nafaqooyinka muhiimka ah ee ka kooban maaddooyinka ku siinaya adiga khibradda ugu jilicsan, ee ugu waxtar badan bushimaha iyo qoyaanka.
Ujeedo Labaad - Foojinaya & Qoyaanka Dibnaha Daryeelistiisa: LIP SCRUB-kan cajiibka ah wuxuu ka koobanyahay dabiici ahaan, sonkor halkii laga heli lahaa dhadhanka kiimikada. Isku darka xariifka ah ee Organic, strawberry, blueberry, shukulaatada, walxaha qajaarka ah wuxuu abuuraa xalka ugu fiican ee xalinta daryeelka bushimaha si loo daayo qalalka, bushimaha qallafsan IYO IYO wuxuu ka dambeeyaa saameyn qoyan oo jilicsan oo jilicsan oo loogu talagalay bushimaha jilicsan ee ilmaha.
Xadgudub Bilaash ah: Dibno xoqida bushimahayagu weligood laguma tijaabiyo xayawaanka.
Quruxda Joogtada ah ee Quruxdu Waa Inay Leedahay: Daahirinta bushimahaaga waa lama huraan si loo hubiyo in bushimahaagu ay yihiin kuwo siman, jilicsan oo jilicsan. Bushimahaaga ka dhig kuwo macaan oo gabi ahaanba la dhunkado!
2.Shaxgal wax ku ool ah - kareemka caatada ah
Kareemka khafiifka ah wuxuu saameyn gaar ah ku leeyahay yareynta dufanka, gaar ahaan kuwa buufsan, sheygan wuxuu leeyahay saameyn aad u wanaagsan oo adeegsi ah.
Waxay yeelan kartaa saameyn muuqata ka dib wax ka badan hal bil oo la isticmaalo.
Isticmaalka joogtada ah ee dhowr bilood wuxuu ku siin karaa natiijada ugu badan ee aan dib uga noqon doonin wax badan haddii aad si buuxda u joojiso.
Gaar ahaan, kareemkaan khafiifka ah wuxuu saameyn aad u wanaagsan ku leeyahay hagaajinta lugaha oo barara.
Laakiin dadka doonaya inay miisaanka si dhakhso leh u dhuuqaan ama dufankoodu aad u badan yahay, u isticmaal mar subaxdii iyo mar fiidkii ah.
Si loo ilaaliyo natiijada ugu fiican waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho 3-5 bilood / sanadkii.